कसरी बन्ने रातारात धनि ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > कर्पोरेट > कसरी बन्ने रातारात धनि ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् !
त्यसैले हरेकले पैसा कमाउने जुक्ति खोजिरहका हुन्छन । यहाँ हामीले केही तथ्य उल्लेख गरेका छौं । जुन फलो गर्नु भयो भने पैसा कमाउन सहज हुनेछ । यस्ता छन् पैसा कमाउने तरिका:
महत्वकांक्षी बन्नुहोस र सपना देख्नुहोस :
कुनैपनि काम गर्नका लागि पहिले सपना देख्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले तपाईं पनि पैसा कमाउन चाहनु हुन्छ भने आजैबाट सपना देख्न सुरु गर्नुस । जसले सपना देख्छ जो महत्वकांक्षी बन्छ उसले मात्रै समाजमा मान, प्रतिष्ठा र पैसासमेत कमाउन सक्छ ।
क्षमताको पहिचान गर्नुहोस :
शुरुमा तपाईंले आफुलाई चिन्नु जरुरी छ । त्यसैले तपाईं पहिले आफ्नो क्षमताको पहिचान गर्नुहोस् । र त्यसैअनुसार काम गर्नुहोस्, त्यसले तपाईंलाई सफलताको शिखरमा पुग्न सहयोग गर्छ । तपाईंले मनदेखि नै गरेको काम तथा क्षमताको पहिचानले मात्रै तपाईले खोजेको सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ ।
कडा परिश्रम गर्नुहोस :
कुनै काम सुरु गर्नुहोस :
अन्य तरिका :
त्यसो त पैसा कमाउन कसलाई मन लाग्दैन र ? तर दुई नम्बरी धन्धा नगरी सजिलै पैसा कमाउन सकिन्छ र ? भन्नेहरु पनि नभएका होइन्, तमाम भेटिन्छन् बजारमा । उनीहरुका लागि जवाफ दिन सकिन्छ ।
वर्षैपिच्छे तलब बढ्ला भनेर आश गर्नुभयो भने तपाईं कहिल्यै धनी हुन सक्नुहुन्न । त्यसैले राम्रो तलब दिने जागिरको खोजी गर्दै अफिस छिटोछिटो बदल्नुस ।
२०७६ कात्तिक २० गते प्रकाशित
२०७६ कार्तिक २० गते ०९:४६ मा प्रकाशित
अधिकृत तहको पुनर्योग नतिजा सार्वजनिक (जिल्ला र नाम सहित)
डिजेल पेट्रोलमा बढाइएको मूल्य रु ५ तत्काल लागु नहुने !
बिहीबार सेयर बजारमा हरियाली, हेर्नुहोस के-केमा झुम्मिए ग्राहक !
अब कहिलेदेखि पर्छ पानी?
विद्यालयको भवन निर्माणका लागि १ करोडभन्दा बढी सहयोग